Peritonitis amin'ny alika | Alika Manerantany
Antsoina hoe peritonitis mankany amin'ny fivontosan'ny membrane izay manitsy ny kibon'ny alika, amin'izay dia mahasosotra mafy ilay faritra. Ny vokany dia mety hampihoron-koditra ary maharary amin'ny biby, ka izany no mahatonga ny soritr'aretiny miharihary hiseho haingana. Amin'ity lahatsoratra ity dia mamintina ny angona lehibe momba an'io aretina io izahay.
Izy io dia mampiavaka azy, araka ny voalazantsika teo aloha mamaivay ny peritoneum, ny membrane izay mametaka anaty ny kibon'ny kanelina ary moka ny tsiranoka izay tsy tokony hiditra ao amin'ilay faritra anatomika. Ity fivontosana ity dia mety hitranga amin'ny fomba voafaritra na amin'ny ankapobeny, ity farany no tena matotra.
Izy io dia mety hitranga amin'ny antony maro samihafa, toy ny vatosoa, bakteria, trauma amin'ny kibony, homamiadana, pancreatitis, na fanamafisana (fanamafisana ny fantson-tseranana) Mahatonga izany rehetra izany soritr'aretina mampiahiahy, izay ny tena fahita dia:
4. fivontosan'ny kibo.
5. Fanaintainan'ny kibo.
6. Tsy firaikana.
7. Very fahazotoan-komana.
Alohan'ny iray amin'ireo famantarana ireo dia tsy maintsy mandehana avy hatrany any amin'ny toeram-pitsaboana biby, izay hanatanterahan'ilay manam-pahaizana andrana fitsapana vitsivitsy hamaritana ny olana. Ny voalohany amin'izy ireo dia ny fanadinana ara-batana tanteraka, arahin'ny taratra X sy ny ultrasound hanehoana ny atiny. Fitsapana ra sy urine ary fanisana ra feno koa angamba no ilaina.
Ny fitsaboana dia hiankina amin'ny karazana peritonitis iainan'ny biby sy ny hamafiny. Na izany na tsy izany dia tokony hanarona torolàlana telo tsotra izy io: manamafy orina ny fiorenan'ny vatana, mitsabo ny aretina (raha misy), ary mamantatra ny anton'ilay olana. Indraindray a fitsabahana amin'ny fandidiana; ohatra, rehefa miangona ny tsiranoka ary ilaina ny famoahana ny kibo.
Raha ny an'ny fisorohana, ny marina dia tsy misy fomba hisorohana an'io korontana io. Na izany aza, ny fanaraha-maso matetika ny fitsaboina momba ny biby dia manampy antsika hahita haingana ny olana, izay manamora ny fanasitranana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Peritonitis ao amin'ny alika
Ahoana no hikarakarana ny mason'alika